China eqaqambileyo 1100 1050 3003 Aluminium oxutywe Plate 3 Bar 5 bar Mirror olukhazimlisiweyo Aluminium Sheet yoMvelisi kunye Supplier | URuiyi
Owona msebenzi uphambili kukuchasa i-skid kunye nokuhombisa. Inokusetyenziswa okubanzi, okusetyenziselwa ulwakhiwo kunye nokuthuthwa. Iipaneli zegridi ze-aluminium ezihombisayo zezoluhlu lweepaneli zealuminium emsulwa. Ngokomgaqo wegama lophawu lomhlaba jikelele, inqanaba elifanelekileyo le-aluminium yomxholo we-aluminium yothango ingaphezulu kwama-99.5%. Ngenxa yokucoceka okuphezulu kwe-aluminium gratings kunye nenkqubo yemveliso elula, ixabiso lincinci. Kuluhlu olusetyenziswa ngokuxhaphakileyo kumashishini aqhelekileyo. Iindidi zeepateni eziqhelekileyo zokuhombisa ialuminium zii-1, 2, 3, kunye ne-5.
Isinyithi sephepha lesinyithi sealuminium sibhekisa kubukhulu bephepha lealuminium nge-mm liphakathi kwe-0.15 kunye ne-2.0mm. Phakathi kwazo, i-0.5 mm ishiti ye-aluminium, iphepha le-1mm ye-aluminium kunye ne-2mm ipleyiti ye-aluminium zezona zinto zaziwayo kwimilinganiselo ye-aluminium. Ukuba ulinganisa ubungakanani beplate ye-aluminium nge-intshi, iphepha eli-1 eli-16 lealuminiyam limalunga ne-1.5mm ubukhulu, kwaye olu hlobo lwephepha le-alu lukwangumbala we-aluminium. Ngokubhekiselele kwiphepha eli-gauge aluminium, i-12 gauge aluminium sheet (2.0mm), i-14 gauge aluminium sheet (1.6mm), i-16 gauge aluminium sheet (1.3mm) kunye ne-18 gauge aluminium sheet (1.2mm) zonke zikolu didi.
Olu hlobo lwephepha elimnyama lealuminium linoluhlu olubanzi lwezicelo, ngakumbi kumzi mveliso wokuhombisa. Izixhobo zokukhanyisa kwizakhiwo ezahlukeneyo, ikhaya lethu, isikolo, isibhedlele, indawo yokuthenga njalo njalo. Zombini ngenkangeleko kunye nokuhlala ixesha elide, amashiti amancinci ealuminium anokusanelisa. Ukongeza, esi sinyithi senziwe nge-aluminium sheet sisenokusetyenziswa njengesibonisi selanga, kwaye sinokuba negalelo elikhulu kuthi ekugcineni amandla.
I-alloy aluminium 1100 yimbumba ye-aluminium emsulwa, umxholo wealuminium (iqhezu lobunzima) yi-99.00%, kwaye ayinakuphathwa ngobushushu. Inokumelana okuphezulu kokubola, ukuqhuba kombane kunye nokuqhutywa kwe-thermal, uxinano lwayo lincinci, ukubakho kweplastikhi kulungile, kwaye izinto ezahlukeneyo zealuminium zinokuveliswa ngoxinzelelo
ukuqhubekeka, kodwa amandla asezantsi. Enye inkqubo yokusebenza ngokufanayo iyafana ne-1050A.
I-1100 aluminium alloy ipleyiti / i-aluminium coil zihlala zisetyenziselwa ukwenza iipropathi zokwakha nokulungisa, ukumelana nokubola okuphezulu, kwaye akufuni mandla aphezulu, njengokutya kunye nokuphathwa kwemichiza kunye nezixhobo zokugcina, iimveliso zeshiti, izixhobo zentsimbi zokuqengqeleka nokuqengqeleka, kunye izitshixo indibaniselwano iwelding. izibonakalisi, iipleyiti zamagama, njl.
IAluminiyam ingxubevange ye-1050 yaziwa ngokuxhathisa kwayo umhlwa, i-ductility ephezulu kunye nokugqiba okubonisa kakhulu
I-aluminium ye-1050-H24 yi-1050 aluminium kwi-H24. Ukufezekisa lo msindo, isinyithi siqinisiwe, emva koko songezwe ngokuyinxenye, kumandla ophakathi kwesiqingatha (O) kunye ne-H28).
Imivalo yegrafu kumakhadi epropathi asezantsi thelekisa i-1050-H24 aluminium ukuya: kwi-1000-series alloys (phezulu), zonke ii-aluminium alloys (phakathi), kunye nendawo yonke yedatha (ezantsi). Ibha epheleleyo ithetha ukuba eli lelona xabiso liphezulu kwiseti efanelekileyo. Ibha egcwele ngokupheleleyo ithetha ukuba ngama-50% aphezulu, njalo njalo
Aluminium ukunyathela iphepha, Aluminium inyathela ipleyiti, Aluminium itsheki ipleyiti abavelisi, Aluminium sheet aluminiyamu sheet, China sheet sheet abenzi, Umatshini weAluminiyam, isinyithi seplate yensimbi
Izicelo kunye nemisebenzi
I-5754 h114 i-aluminium yokukhangela ibhodi ilunge kakhulu kwizicelo ezineemfuno zokusebenza eziphezulu, ezinje ngeenqanawa ezinkulu zokuhamba ngenqanawa, iinqaba zomoya zangaphakathi, iinqanawa / imigangatho yangaphakathi / iindonga, iibhulorho zabahambi ngeenyawo, ileli yomsebenzi weemoto, amaqonga eendaba, njl.
I-1050 ye-aluminium ibhodi yothango ye-6061 yebhodi yothango lomgangatho wezithuthi zikawonke-wonke kunye nomgangatho wezindlu zangasese zikawonkewonke
I-5086 Aluminium nothango lokuhamba ngefriji
I-4017 aluminium pedal isetyenziswa ngokubanzi kumhombiso wokwakha
Egqithileyo Iphepha leAluminiyam engama-6061-T651
Okulandelayo: China PVDF camera aluminiyam edityanisiweyo panel lenjongo ACP sheet mveliso